सल्यानमा घट्यो अचम्मको घ’टना ! बेहुली लिन आएका जन्ती आधा बाटो बाटै फर्किए - Nepal Insider
सल्यानमा घट्यो अचम्मको घ’टना ! बेहुली लिन आएका जन्ती आधा बाटो बाटै फर्किए
March 15, 2020 88
सल्यानमा बेहुली लिन आएका जन्ती बेहुलाको उमेर कम भएको जानकारी पाएपछि आधा बाटो बाटै फर्किएका छन्। रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिकाबाट सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा बेहुली लिन आएका जन्ती बेहुलाको उमेर नपुगेका कारण आधा बाटो बाटै फिर्ता भएका हुन्।
बेहुली लिन करिब ४५ जना जन्तीसहित बस सल्यान प्रवेश गरेको थियो। बेहुलाको उमेर नपुगेको थाहा पाए पछि प्रहरीले जन्तीलाई बाटोबाटै फिर्ता पठाएको थियो। प्रहरीले उमेर नपुगेको विवाह भएपछि कारबाही गर्न भन्दा अगाडि नै विवाह रोकेर ठूलो दु’र्घटनाबाट रोकेको बताए।
बालविवाह गरे वा गराए वा संलग्न भएको खण्डमा दुलाहा, बेहुलीसहित संलग्नलाई समेत तीन वर्ष कैद वा ३० हजार ज’रिवाना अथवा दुवै स’जाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। पछिल्लो समय सल्यानमा बाल विवाह न्यूनीकरण अभियान सञ्चालन गरेको प्रहरीलाई स्थानीय तह, मानव अधिकारकर्मी, स्थानीयलगायतले साथ दिँदै आएको छन्।
Prevकोरोना भाइरसको संक्रमण नआओस भन्दै शिद्ध शक्तिपीठ शैलेश्वरी मन्दिरमा भाकल
Nextसरकारलाई भिम रावलको कडा प्र’हार : कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न कसले रोक्यो, केले छेक्यो ?
रुघाखोकी लागेपछि आराम गर्दै प्रचण्ड , कोरोना संक्रमणको आशंका
अस्ट्रेलियामा फेरि दन्कियो आगो, राजधानीसहित कयौं स्थान खाली गराइयो
चीन सरकारले रा’हत स्वरुप निशुल्क दिएको इण्डक्सन चुलो ४ हजारमा ध’माधम बेच्दै खाद्य